Yeyiphi ThinkPad kufuneka Ndithenga endaweni yam MacBook Air? - News umthetho
Yeyiphi ThinkPad kufuneka Ndithenga endaweni yam MacBook Air?
AB ufuna laptop entsha izifundo zakhe yaye iingqameko choice ThinkPads ezimbini Lenovo. Yiyiphi ziza kukhawulelana okungcono?
Eli nqaku obizwa “Yeyiphi ThinkPad kufuneka Ndithenga endaweni yam MacBook Air?” yabhalwa ngu uJack Schofield, ngokuba theguardian.com ngoLwesine 2nd Agasti 2018 09.40 i-UTC
Ndiya kungena isikolo Grad ithwani, nabaceba ukuphucula yam 2015 MacBook Air. Emva kokuba uphando oluninzi, Ndiye iingqameko wehla waya ThinkPad T480 kunye yesithandathu-isizukulwana ThinkPad X1 Carbon. With ukuguqulwa kunye iziqinisekiso, zombini bawe phakathi kwam 1800 € (£ 1.599) mali, kunye T480 ukuba singathembeka zitshiphu. kunjalo, ukuba umfundi, nokuthwaleka yiprayorithi enkulu. Le X1 elula ngokuqinisekileyo malunga 1.2kg, kodwa ibengakanani umahluko oku kuya kwenza ngokwalo ezisebenzisekayo?
umgangatho Keyboard enye efunekayo, nokubuyekezwa ebonisa ingagqibeki. Yeyiphi isixhobo bekuya kuba ukubheja engcono?
Ekugcineni, ngoko kubalulekile ukuphucula Core i5-8250U ukuya i7-8550U Core? ukusetyenziswa yam ikakhulu ukukhanya - processing igama, uqaphele-ukuthatha, ukhangelo - kodwa ndizimisele ukugcina eli laptop kwiminyaka emihlanu ubuncinane. AB
Ezi laptops mabini 14 akumele sifaniswe, kuba zisekelwe bulumko design ezahlukeneyo ngokupheleleyo. Yinto womyoleli nenkqubela eyenziwe ekunciphiseni ubungakanani kunye ubunzima laptops emveli ukuba ngoku sisondele ngokumangalisayo.
the ThinkPad T480 i workhorse esetyenziswa kakhulu neenkampani ezinkulu, hayi "iqhawe" imveliso efana X1 carbon. kunjalo, T480 kulo nyaka kukuba nje ukubhitya ngokukhanya ukuya kwindawo apho phakathi komgama iphawulekayo le carbon X1, nakuba soze ukubamba up. the T480S version nakakhulu.
Kukho iseyi imarike enkulu for PC, ngoko kuza iintlobo ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Ezi ziqwempu market ziquka ultraportables, tablet kanye convertibles, laptops eziqhelekileyo, zonke-in-abo kunye desktop-abavala, laptops yokudlala kanye workstations. kwilungu ngalinye kwakhona onomlinganiselo ixabiso eyahlukileyo, with "ixabiso" Ibanga abantu bebukele iipeni zabo (umzekelo Dell Inspiron) kunye neemodeli eliphezulu-komsebenzi kubathengi upmarket (umzekelo Dell XPS).
Kwimeko Lenovo kaThixo, i ThinkPad E series (ngaphambili Edge) ke ibanga ixabiso, i L models eziqhelekileyo kunye T Ibanga ukuba isiphelo lwetshiphu emsebenzi-. the X series laptops ezi ultraportables ngelixa P models workstations mobile.
Kukho kwakhona bohlukene phakathi koomatshini kwabathengi kunye namashishini. Nje, amashishini bafuna kwiilephutophu ukuba functional, okuhlala, esongwayo and repairable. Kwakhona ukhetha sisimo ezizinzileyo. Bafuna ukuthenga amawaka laptops ukuba babe iinkcukacha ezifanayo, hayi laptops Umboleki ukuba ukutshintsha rhoqo emva kweenyanga ezimbalwa.
Zombini ophawula yakho laptops eziphakamileyo-yokusebenza eyakhelwe American imigangatho mil-zezirhubuluzi. Umahluko kukuba uluhlu T yenzelwe ukuba esongwayo kunye repairable, njenge laptop ishishini yemveli, ngoxa X uluhlu yenza onakalisa ukuba ibe nakho ukuguqulwa.
Kutheni athenge T480?
I Lenovo Thinkpad T480. Thatha: Lenovo
I ThinkPad T480 yenzelwe ukuba upgradeable kunye memory kwiindawo zokubeka zayo zombini kwaye kuxhasa ku 32GB. Oku kuya isibheno badwelisi benkqubo kunye kubasebenzisi zoshishino abafuna iinkumbulo ukusingatha spreadsheets ezinkulu, zolwazi kunye nemisebenzi efanayo.
I T480 inalo drive bay epheleleyo eya kuthatha i hard drive, nangona kaninzi iinqanawa i SSD. Unga ukuthuthukisa HDD okanye SSD ukuya i 1TB SSD, ukuba kuyimfuneko. Kwakhona unalo ingqokelela kakuhle zamazibuko kuquka lokuduma 3, i-USB 3.0, Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi and SD amazibuko, kunye port RJ-45 Ethernet.
Kanye ezinye ThinkPads, i T480 has a yesibini "ibhulorho" ibhetri, okuyinto abasusekayo: uyakwazi ukuphatha i spare kunye swap phezu xa usenza ngaphandle juice. Ubomi ibattery ezizodwa neebhetri ezimbini 24Whr: Lenovo izicelo 13.9 iiyure. kunjalo, ungafaka ndiyingwenya 72Whr ibhulorho ibhetri ziqhube ukuba ibango 30.3 iiyure zonke. Kunjalo, oku kwandisa ubunzima, kwakunye uPienaar ezantsi.
Ehlabathini ekuqaleni kwale nkulungwane, Ndandidla baphathe ThinkPad kunye neebhetri ezimbini ezityebileyo kwaye singqine ukuba, Ukuba ufuna ubomi bebhetri ende, isebenza imphathe. Kodwa uyazihlaziya kubo isuntswana ukuba ngumsebenzi.
I T480 kokona kungcono ukuba ufuna iinkumbulo, okanye kufuneka asebenze kude ngamandla mbane. Kodwa ezi mpawu kongeza Ebubanzini (19.95mm) ubunzima (ukusuka 1.58kg ukuya 1.87kg).
Kutheni ukuthenga carbon X1?
I-carbon X1 Kuninzi njenge yakho MacBook Air ekubeni zenzelwe kuba ezingcakacileyo, ukukhanya kangangoko kunokwenzeka ukuba ubukhulu screen kunye neenkcukacha. Inyaniso, e 1.13kg ukuqala ubunzima bayo, i X1 kuya kuba lula ngakumbi Air yakho 1.34kg.
Ukuba ethwele nxazonke, uya kuqaphela ngokuqinisekileyo umahluko phakathi X1 kunye T480, nokuba usemtsha yaye ngokwanele ukuba engqondweni.
I Lenovo Thinkpad Carbon. Thatha: Lenovo
Le X1 ayitshixwanga ngokupheleleyo phantsi kwaye unako ngokulula ukususa ngasemva. Engenelela lememori soldered ku, ukuze ukutshintsha noko uthenga, ukuya kutsho 16GB. kunjalo, uyakwazi ukutshintsha SSD enzelwe indlela enkulu, ku 1TB. Oku kunokuba onenzuzo uphuculo ngenye imini, Ukuba amaxabiso SSD bayaqhubeka ziyehla.
Ukugcina indawo ubunzima, ulahlekelwa drive Bay T480 kunye Ethernet port, kwaye ikhadi SD slot kuyehla kube slot microSD. Kodwa okungenani ufumana ezimbini lokuduma 3 ichweba, Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi kwaye i dongle Ethernet.
Njengoko umsebenzisi MacBook Air, uya kuba nolwazi kunye nokubonelela ezifunekayo i laptop ultraportable. Ukuba wabafumana ngokwenene amacebo, ukuba wayeza kuba nesizathu sokuba aye kufuna T480. Ukuba akukho njalo, le carbon X1 inika amandla kunye expandability ngaphezu Air, ngexabiso eliphezulu.
Zombini T480 kunye X1 Carbon babe iziqhubekisi Intel zakutshanje yaye ayihlangule kakhulu ukusebenza efanayo. Ekubeni uthenge desktop nge i5-8400 Core, Ndifike pretty siqinisekile ukuba i5-8250U quad-core kuya kuthatha iminyaka emihlanu. Wena Awudingi i7-8550U Core lwenkqubo yokunikeza igama, ukuthabatha amanqaku kunye lokukhangela iincwadi. Le i7 kubiza kuphela an extra £ 91,20 kwi-UK, okuyinto okulinga, kodwa mhlawumbi uchitha imali kwiscreen engcono.
Ndandingakwazi ndithi yeyiphi Umatshini une keyboard engcono ngaphandle kokuzama kubo ecaleni kwenye. in ithiyori, i T480 kufuneka ibe ngcono, ngokuba laptops ziyatyeba ukuvumela izitshixo yokuhamba ngaphezulu. kunjalo, banikwe X1 Carbon kaThixo hero status njengenkokeli brand Lenovo kaThixo, Ndingathanda ulindele ukuba ibe ngaphezulu avareji hayi kubi kakhulu.
kungenjalo, njengoko ndiqhubeka ndisithi, ikhibhodi laptop engekho ergonomic. nanini na kunokwenzeka, ubeke laptop yakho edlulisa - okanye nje imfumba yeencwadi - uzifake i USB keyboard ergonomic ne mouse.
MacBook izikrini ngokubanzi kakhulu ngelixa ThinkPad screens asusela akunjalo ukuba ebalaseleyo. Ukuba ukuthenga T480 ne 1366 x 768 TN (non-IPS) screen, ubuya kudana. Izikrini X1 Carbon ngokubanzi ibonakale ngcono, kwaye wenza kwakhiwa custom, ufumana ukhetho. In the UK, eliphezulu-resolution WQHD (2560 x 1440) screen kwezoqeqesho extra £ 69,60, ngelixa top-of-the-uluhlu 2560 x 1440-pixel HDR (Range Dynamic High) screen, ebukeka amazing, athi £ 120.
Ukuba Ukusetha ukugqama ophezulu kakhulu ke uya kuziqwenga ibhetri yakho, kodwa enye ibali.
Ekugqibeleni, zombini imishini okulungileyo, kodwa ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Kubonakala kum ukuba uya kuzuza imisebenzi engcono le carbon X1 kaThixo - ukudlala, abize fast and nomgangatho screen - kodwa nina niya ngokwenene kuzuza iimpawu i T480 kaThixo, ezifana neebhetri ezityebileyo kunye nekhono lokusingatha 32GB of RAM. Ekugqibeleni, kunjalo, ukuba imali yakho, ukhetho lwakho.
← Microsoft uqala omncinci, Surface Yiya angi i iPad Ndizifumana njani The Best Ukusuka Alexa? →